उपचार व्यवस्थापनमा के गर्दैछ सरकार ? : RajdhaniDaily.com sharethis
संक्रमण तेस्रो लहर जोखिम
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण रोकथामका लागि आइसीयु बेड संख्या तीन हजार पु-याईएको छ । यस्तै, ६ सय ३० आइसीयु बेड थप गर्ने प्रकृयामा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । हाल आइसीयु बेड संख्या दुइ हजार ६ सय रहेको छ ।
यस्तै, देशभरका अस्पतालमा भेन्टिलेटरको संख्या नौ सय पु-याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.कृष्ण पौडेलले भेन्टिलेटरको संख्या एक सय ८० थप गर्ने प्रकृयामा रहेको बताए ।
– भोलिदेखि नेपाल मास्क अभियान
– सोमबारबाट खोप सप्ताह सुरु
– मंसिरसम्म झण्डै एक लाख ९४ हजार संक्रमित थपिने प्रक्षेपण
– ३८,८०० जनालाई उपचार आवश्यक पर्ने
– सोमबारदेखि जेष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्रा
स्वास्थ्य मन्त्रालय निती योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अन्तरमन्त्रालय, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबिच समन्वय जरुरी रहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.दीपेन्द्ररमण सिंहले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताए ।
सो खोप दोस्रो मात्राका रुपमा जेष्ठ नागरिकलाई दिन सकिनेभनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अघि निर्णय गरीसकेको छ । यस्तै, शनीबारनै भुटान सरकारले पनि नेपाललाई तीन लाख मात्रा एस्ट्राजेनीका खोप उपलब्ध पठाउँदैछ । सरकारले संक्रमण रोकथाम अभियानलाई सार्थक दिन चैतभित्र खोप लगाउन योग्य आम नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै, विहिबार देशभर ३ हजार ९ सय ३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको १८ हजार ४०८ जनाको पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षणमा ३ हजार ९३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ११ हजार ८७० जनाको पिअिसार परीक्षण गर्दा ३ हजार ७ र र ६ हजार ५३८ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ९३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । देशभर बीहीबार २ हजार १२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ३७जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । देशभर सकृय संक्रमितको संख्या ३४ हजार चार सय २२ रहेको छ ।
सकृय संक्रमितमध्ये ३१ हजार १०८ होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । ७१३ जना आइसियुमा र १५८ जनाको भेन्टिलेटरमा राखि उपचार भईरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभर ३७५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।
कुन-कुन देशलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउन निषेध छ ? टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत ६० भन्दा धरै डाक्टर र नर्समा कोरोना संक्रमण
कांग्रेस प्रदेश २ सभापतिमा संस्थापनका कृष्ण यादव विजयी